Google Amafomu - dala uphinde uhlaziye izinhlolovo, mahhala.
Iya ku-Google Amafomu
Dala okuhle Kim amafomu
Dala amafomu amahle U-Tom
Qoqa futhi hlela ulwazi olukhulu noluncane nge-Google Amafomu. Mahhala.
Iya kokuthi i-Google Amafomu Iya kokuthi i-Google Amafomu
I-Google Amafomu oyithandayo enokuvikeleka okwengeziwe nokulawula kwamathimba.
Thola izimpendulo ngokushesha
Hlelani uhambo lokukhempa, phatha ukubhalisela umcimbi, yenza i-poll ngokushesha, qoqa amakheli we-imeyili we-newsletter, yakha imibuzo, nokunye okuningi.
Sebenzisa isithombe sakho noma ilogo, futhi Amafomu azokukhethela imibala ekulungele ukuqedela ifomu lakho elihlukile, noma khetha isethi yamatimu akhethiwe ukusetha ithoni.
Imibuzo nezimpendulo, indlela yakho
Khetha kuzinketho zemibuzo eyinqwaba, ukusuka kukukhetha kwezimpendulo eziningi kuye kokwehliswayo kuye kusikali somugqa. Engeza izithombe namavidiyo e-YouTube, noma utayilishe ngamagatsha ekhasi kanye nokunengqondo kokweqa umbuzo.
Dala noma phendula usohambweni
Amafomu ayasabela, ngakho lokho kusho ukuthi kulula (futhi kuhle) ukukwenza, ukuhlela, nokusabela kumafomu kuzikrini ezinkulu nezincane.
Ihleliwe futhi ihlaziyiwe
Izimpendulo zakho zezinhlolovo zakho ziqoqwa ngobunono nangokuzenzakalelayo kokuthi Amafomu, ngolwazi namashadi okusababela kwesikhathi sangempela. Noma, thatha idatha yakho iye kude ngokuyibuka yonke kokuthi AmaSpredishithi.
Faka amagama, i-imeyili...
Kufanele uphume ku-Ferry Building. U-Tom
Ucabanga ukuthi uzoqeda nini ukuhlela?
ULwesibili, 1:06 PM
Yakhe ndawonye Engeza abahlanganyeli ukuvumela noma ubani—abangane, ofunda nabo, osebenza nabo—ukuthi bakhe inhlolovo yakho nawe, ngokuthi Amadokhumenti, AmaSpredishithi, nokuthi Amaslayidi.
Yabelana nanoma ubani Chofoza ukwabelana futhi uvumele noma ubani—abangani, ofunda nabo, osebenza nabo, umndeni—ubuke, abeke amazwana noma ukuhlela idokhumenti yakho.
Hlela ngesikhathi sangempela Lapho othile ehlela idokhumenti yakho, uyakwazi ukubona ikhesa yabo njengoba benza izinguquko noma begqamisa umbhalo.
Xoxa futhi beka amazwana Xoxa nabanye ngokuqondile ngaphakathi kwanoma iyiphi idokhumenti noma engeza amazwana ngokuthi “+” ikheli labo le-imeyili futhi bazothola isaziso.
Usulungele ukwakha inhlolovo yakho yokuqala? Kumahhala futhi kulula nge-Google Amafomu.
Mayelana ne-Google Amadokhumenti
Ukulanda kanye nokuningi
Amadokhumenti e-iPhone kanye ne-iPad
AmaSpredishithi e-iPhone kanye ne-iPad
Amaslayidi e-iPhone kanye ne-iPad
Ukuhlela kwe-Office kwe-Amadokhumenti, AmaSpredishithi, kanye nama-Amaslayidi
Isikhungo Sosizo se-Amadokhumenti
Iforamu ye-Google Amadokhumenti
I-Google Cloud Platform
Izinhlelo zokusebenza ze-Google ze-Imfundo
Izinhlelo zokusebenza zikahulumeli ze-Google
Izixazululo Zebhizinisi ze-Google
Shintsha ulimi: Afrikaans Azərbaycanca Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English English (United Kingdom) Español Español (Latinoamérica) Euskara Filipino Français Français (Canada) Galego Hrvatski Isizulu Íslenska Italiano Kiswahili Latviešu Lietuvių Magyar Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Português (Portugal) Română Slovenčina Slovenščina Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Монгол Русский Српски Українська ქართული Հայերեն ‫עברית‬ ‫اردو‬ ‫العربية‬ ‫فارسی‬ አማርኛ नेपाली मराठी हिन्दी বাংলা ગુજરાતી தமிழ் తెలుగు ಕನ್ನಡ മലയാളം සිංහල ไทย ລາວ ខ្មែរ 한국어 中文 (香港) 中文（简体中文） 中文（繁體中文） 日本語